पछि पछुताउँदै नभन्नु होला- ‘एैंच सोल्टी, नजिकको तीर्थ हेला पो गरिएछ यार !’ « Gajureal
पछि पछुताउँदै नभन्नु होला- ‘एैंच सोल्टी, नजिकको तीर्थ हेला पो गरिएछ यार !’
प्रकाशित मिति: २१ चैत्र २०७४, बुधबार १७:३८
जंगलको बिचमा छ तर कतै पात पतिंगर भेटिंदैन । हजारौं पर्यटक आउँछन् तर कुनै फोहोर पाईंदैन । सुन्दर बगैंचा छन् तर कसैले फूल चुँड्दैन । चिडियाखाना त्यहीं छ । स्विमिङ् पूल त्यहीँ छ । रोटेपिङ् त्यहीँ छ । शान्त, शुन्दर, सभ्य र सुसंस्कृति यो ठाउँ कुनै बिकसित देशको भन्ठान्नु होला तर यो हाम्रै हेटौंडामा छ । तपाईं पुग्नु भएको छैन र ? छ भने आफ्नो अनुभव कमेन्टमा लेख्नुहोला, छैन भने प्लिज, डन्ट मिस ईट !
७५ वटै जिल्ला घुमेपनि ‘हेटौंडाको यो शहीद स्मृति पार्क’ पुग्नै पर्ने खालको छ । जीवनमा एकपटक पनि पुग्नु भएन भने धेरै कुरा मिस गर्नु हुनेछ ।
पहिलो, नेपालको बिदेशी स्तरको सुन्दर पार्क मिस गर्नु हुनेछ । दोश्रो, समर्पण भए सबै कुरा संभव हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा मिस गर्नु हुनेछ । तेश्रो, जुझारु नेतृत्व भए पहरामा पनि फुल फुलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण मिस गर्नु हुनेछ ।
यो पार्क बनाउन सरकारी, गैह्र सरकारी, संस्थागत र ब्यक्तिगत श्रम र सम्पती परेको छ । सबै कुरा भएर पनि राम्रो नेतृत्व भएन भने कुनै पनि योजना पुरा हुँन सक्दैनन् । तर, इमान्दार र प्रतिबद्ध नेतृत्वले संयोजन र सुरुवात गरेका योजना सफल र संरक्षित हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण यो पार्क हो ।
हेटौंडाका तत्कालिन मेयर तथा ३ नंबर प्रदेशका बर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल यो सुन्दर पार्कका मूल खम्बा हुन् तर पैसा, श्रम र सहयोग धेरै नेपालीको रहेको छ ।
हाम्रो समस्या के हो भने निर्माण त हुन्छ तर त्यसको संरक्षण हुँदैन । तर, यो पार्क सुन्दर बनेको छ र बनेपछि सही ढंगले सञ्चालन र संरक्षण पनि भएको छ ।
यहाँ शहीद स्मारक, मदन भण्डारी स्मारक, शहीद स्मारक चिडियाखाना, आधुनिक झोलुङगे पुल, अत्याधुनिक पिकनिक स्पट, लभ प्वाईन्ट, बाल क्रिडास्थल, स्विमिङ् पुल, मिनि सर्कस लगायत थुप्रै मनोरञ्जन स्थल छन् ।
अन्तराष्ट्रि्य क्रिकेट मैदानका निर्माणकालाति स्थल पहिचानका क्रममा अभियन्ता कलाकार धुर्मुस, सफाई अभियन्ता अर्जुन धरेल, इन्जिनियर रबि भुषण झा, कलकार अर्जुन घिमिरे, कुमार कट्टेल लगायत हामी धेरै जनाले आज यो अद्भुत स्थल घुम्ने अवसर पायौं ।
हङ्कङ्को ओसियन पार्क, जापानको डिज्निल्याण्ड वा अमेरिकाको डिज्नी वल्र्डजतिकै छ त म भन्दिंन तर तपाईंकै घर आँगनमा यती सुन्दर, ब्यवस्थित र आधुनिक पर्या—पर्यटकीय—मनोरञ्जन पार्क पुग्न, घुम्न र आनन्दको अनुभव गर्न छुटाउनु भयो भने पछि पछुताउँदै नभन्नु होला, ‘हैत्तेरिका, नजिकको देउतालाई हेला पो गरिएछ !’
नयाँ बर्षको पुर्व सन्ध्यामा यही जानकारी सहित अग्रिम शुभकामना, बिक्रम संवत् २०७५ को ।